Ngoku ungadlala iFlappy Bird kwiwindow yesaziso seMacOS | Ndisuka mac
Umphuhlisi ukwazile 'ukushumeka' umdlalo we Intaka elubhabha kwiwindow yesaziso se-macOS. Ngokuqinisekileyo ezi ziindaba ezibalulekileyo kubasebenzisi beMac.
Ayisiyiyo ngenxa yomdlalo, oseseyinto elula oyithandayo onokuyivula kwiwindow entsha njengayo nayiphi na enye inkqubo, kodwa ngenxa yokuba iApple iyifakile Imac enkulu enkulu ukukwazi ukuhlela umxholo wefestile yesaziso, njengoko kubonisiwe nje. Inqaku elitsha ekufuneka iinkqubo libaxhaphaze ngokuqinisekileyo.
Umdlalo owaziwayo weFlappy Bird, osuswe kwiVenkile yeVenkile ngo-2014, unokuba ubuyela kwimeko yeApple ngohlobo lwesaziso sokusebenzisana seMacOS. Sebenzisa isakhelo esitsha UmsebenzisiNotificationUI Yongezwe kwiMacOS Big Sur, umyili kunye nomphuhlisi uNeil Sardesai ukwazile ukufaka umdlalo we-PlayCanvas u-Will Eastcott kwiwindows yesaziso seMacs.
Sebenzisa iwindow pop-up yesaziso
Ithunyelwe kwiakhawunti yakho Twitter, I-Sardesai isebenzise izinto ezisebenzisanayo ngaphakathi kwefestile ezivelelayo ye izaziso ukuphinda wenze umdlalo, idlalwe ngokupheleleyo ngeMac mouse.
Ngaba ubusazi ukuba ungawubeka wonke umdlalo ngaphakathi kwesaziso sokutyhala pic.twitter.com/LlMx2AjvHH
-Neil Sardesai (@neilsardesai) Aprili 9, 2021
Kulabo abangaqhelekanga ngeFlappy Bird, umdlalo uquka ukukhokela intaka ngokusebenzisa iipayipi ezininzi ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuzibetha. Intaka, ibizwa Kude, ihamba ngompompo ngamnye, kwaye abasebenzisi kufuneka baqiniseke ukuba i-Farby ayibethi nayiphi na imiqobo endleleni, kungenjalo umdlalo uphelile.
Isicelo saye sathandwa kakhulu kwi-2014, sada saya kuthi ga kwi-bill IRandi ye50.000 ngemini enkosi kwiintengiso ezifakwe kwisicelo. Ngaphandle kokususwa kwayo kwiVenkile yeApple, uninzi lwemidlalo ukuza kuthi ga kulo mhla isapapashwa kwaye idlalwe ngenkuthazo evela kwiFlappy Bird.
Oku kuthetha ukuba abaphuhlisi banokulisebenzisa eli thuba litsha linikezelwa yi-MacOS Big Sur, kwaye balungelelanise usetyenziso lwabo ngokukhethekileyo kunye neminye imisebenzi besebenzisa inkqubo ephumayo yefestile yokusebenza. Ndiyathemba ukuba i-Apple ilawula ukusetyenziswa kwesiqhekeza, kwaye ayisetyenziswanga iinjongo zentengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngoku ungadlala iFlappy Bird kwiwindow yesaziso seMacOS
UTom Holland ubuyela kwi-Apple TV + ene "Igumbi elixineneyo"